उत्तर कोरियाले सार्वजनिक गर्यो ‘संसारकै सबैभन्दा शक्तिशाली अस्त्र’, के छ त्यसमा ? – Onlines Time
January 15, 2021 onlinestimeLeaveaComment on उत्तर कोरियाले सार्वजनिक गर्यो ‘संसारकै सबैभन्दा शक्तिशाली अस्त्र’, के छ त्यसमा ?
उत्तर कोरियाले संसारकै सबैभन्दा शक्तिशाली अस्त्र सार्वजनिक गरेको दावी गरेको छ । यो अस्त्र पनडुब्बीबाट प्र’हा’र गरिने जनाएको छ । विल्कुलै एउटा नयाँ प्रकारको बलिस्टिक क्षे’प्या’स्त्र सार्वजनिक गरेको बीबीसीले जनाएको छ।
सरकारी सञ्चारमाध्यमले त्यसलाई ‘संसारकै सबैभन्दा शक्तिशाली अस्त्र’ भनेर वर्णन गरेका छन्। सरकारी सञ्चारमाध्यमका अनुसार प्योङयाङमा सैनिक परेडका क्रममा थुप्रै क्षे’प्या’स्त्र’हरू प्रदर्शन गरिएको र त्यसलाई सर्वोच्च नेता किम जङ्ग-अनले अवलोकन गरेका थिए। त्यसअघि एउटा विरल राजनीतिक बैठकमा नेता किमले संयुक्त राज्य अमेरिका उत्तर कोरियाको ‘अग्रणी शत्रु’ भएको बताएका थिए।
ठूलो आकारका कालो-सेतो रङ्गका चारवटा क्षे’प्या’स्त्र प्रदर्शन गरिएको सरकारी सञ्चारमाध्यमले सार्वजनिक गरेका तस्वीरमा देखिन्छ। विश्लेषकहरूले यसअघि उत्तर कोरिया नदेखिएका अस्त्रहरू देखिएको बताएका छन्। सार्वजनिक गरिएको क्षेप्यास्त्रको कोरियाली नाम उल्लेख गर्दै उत्तर कोरियासम्बन्धी विज्ञ अङ्कित पाण्डाले ‘नयाँ वर्ष, नयाँ पकगकसङ्ग’ भन्दै ट्वीट गरेका छन्।
‘विश्वकै सबैभन्दा शक्तिशाली अस्त्र पनडुब्बीबाट प्र’हा’र गरिने बलिस्टिक क्षे’प्या’स्त्र क्रान्तिकारी सशस्त्र फौजहरूको शक्ति प्रदर्शन गर्दै एकपछि अर्को गरी स्क्वायरमा प्रवेशमा गरेको छ,’ कोरियन सेन्ट्रल न्यूज एजेन्सीले भनेको छ
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) प्रचण्ड–माधव समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र धरापमा परेको बताएका छन् । राजधानीमा आयोजित प्रचण्ड–माधव पक्षको काठमाडौं जिल्ला कार्यकर्ता भेलामा प्रचण्डले भने, ‘७० वर्षभन्दा बढी समयबाट प्राप्त भएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र धरापमा छ । संविधान धरापमा छ । यसको रक्षा गर्नु हाम्रो जिम्मेवारी छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका लागि हामी सबै गम्भीर छौँ । हाम्रै अगाडी यत्रो प्रहार भएको छ ।’
प्रचण्डले आफूहरुले नै निर्वाचित गरेको प्रधानमन्त्री र अध्यक्षले परिवर्तनका मुद्दालाई धूमिल पारेको बताए । ‘हामीले नै निर्वाचित गरेको प्रधानमन्त्रीबाट, हामीले चयन गरेको अध्यक्षबाट संविधान र लोकतन्त्रमाथि प्रहार भएको छ । ऐतिहासिक जिम्मेवारीलाई गहिरो गरी वोध गर्न म सबैमा अपिल गर्छु’ प्रचण्डले भने, ‘हामीले संघर्ष गरेर ल्याएको संविधान धरापमा छ । गणतन्त्रमाथि आक्रमण भएपछि रक्षा गर्नुपर्ने ठाउँमा हामी उभिएका छौं ।
पार्टी एकता गर्दा विचारमा प्राप्त गम्भीरता नदेखाएको भन्ने कुरा सही नभएको उनको भनाइ छ । ‘अहिले त्यो धरापमा परेको छ । हिजो मैले पार्टी एकताका लागि केपी ओलीसँग प्रस्ताव लिएको रहेको थिए । त्यसलाई फर्केर स्मरण गरौं । हामी अलगअलग बसी राख्नुको औचित्य छैन भनेर मैले भनेको थिए । त्यसपछि केपी ओलीले सकारात्मक छु भन्नु भएको थियो । त्यसपछि हामीले बाम गठबन्धन घोषणा गरेका थियौं र नागरिकमा उत्साह छाएको थियो । देशमा सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि हुन्छ भनेर देशैभरी छायो । जनताबाट पनि अनुमोदन भयो । दशकौँ वर्षदेखि बोलचाल नगर्ने साथीहरु दश दिनमै दशकै देखिको सम्बन्ध भएको जसरी प्रचारमा गए । पार्टी एकता गर्दा विचारमा प्राप्त गम्भिरता नदेखाएको भन्ने लाग्दैन । हामीले हतरपतर गरेर एकता गरिएको होइन । सोच विचार गरेर नै एकता गरिएको हो’ उनले भने ।
समाजवादतिर जाने बाटो बन्छ भनेर आफूले पार्टी एकता गरे पनि प्रधानमन्त्रीबाट संविधान र गणतन्त्र नै मास्ने काम भएको उनले बताए ।उनले केपी ओलीमाथि कटाक्ष गर्दै उखान टुक्काले हँसाएर कमेडी सो देखाउन आफूहरु नजुटेको बताए ।अध्यक्ष प्रचण्डले भने, ‘हामी उखान टुक्काले हसाएर कमेडी सो देखाउन जुटेका होइनौं । मान्छेहरुलाई उद्वेलित बनाउन उपस्थित भएका होइनौं । हाम्रा आँखा अगाडि यति ठूलो परिवर्तनमाथि प्रहार भएको छ । हामीले स्थापित गरेका परिवर्तनका मुद्दा एम्बुसमा परेपछि हामी एकजुट भएका हौं ।
हेर्नुस् त यति सानो उमेरमा सौता बेहोर्नु पर्यो, कठै यी नानीको भाग्य?